Uummata Qabsoo Isaatin Waanjoo Gabrummaa Caccabsee Ofirraa Gataa Jiru Waanjoo Haaraa Itti Fe’uuf Yaalun Yakka! |
Baarentuu Gadaa Irraa, Adoolessa 9, 2018
Itiyoophiyaan biyya fedhii uummattootaa malee humna waraanaatin ijaaramteedha. Habashanni kaaba impaayeerettii turan qawwee gargaarsan argatan qabatanii gama kibbaatti duuluun uummattoota har’a impaayerittii keessa jiran addatti ammoo saba Oromoo qayee fi qabeenyarraa buqqisaa turan.Ajjeechaa dabalatee saamicha gaggeessaa turaniin Oromoo hiyyoomsaas turan. Qayee fi qabeenya isaatti abbaa ta’an. Kunoo akkuma muldhachaa jiru waggoota 150n darbaniif itti walfuraa yakkoota danuu Oromoo fi saboota hedduu Impaayerittii keessa jiran irratti raawwachaa jiru. Keessumaa Oromoo diina innikaa godhatanii qayee fi qabeenya isaarratti gabroonfachuun amma wayyaanee har’aatti wanti raawwachaa jiran sukanneessadha.
Murni Wayyaanee ofiin jedhuu fi har’a haangorra jiru kun guyyaa humnaa fi shiraan aangoo qabatee kaasee yakki Oromoo fi saboota har’a impaayeritti keessa jiranirratti hin raawwatin hin jiru. sirni kun afaaniin dimookiraasii, walqixxumaa fi misooma jechaa,cunqursaa,saamicha, hiyyummaa fi booddeetti hafummaa diriirsee yakka danuu raawwateera. Murni shifaataa fi faashistiin kun kan mirga isaafis ta’e lammii isaaf dubbate hunda hidheera,ajjeeseera, biyyaa godaanssiseera.
Akkuma hunduu quba qabuu fi beekutti seenaa mootummoota Impaayeera Itiyoophiyaa keessatti amma wayyaanee har’aatti tokkichi isaanituu filannoo ummataatin aangootti hin dhufne. Shiraan, ajjeechaan, ukkaamsaa fi dararaan aangoo qabachaa turan, ittis jiru. Inni har’a Ministeera muummee haaraa Itiyoophiyaa jedhamee hololamaa jiruuf DR.Abiyyi Ahimadis akkuma bulochitoota Itiyoophiyaa duraanii shira uummataa fi walirratti hojjechaa jiraniin aangotti dhufe malee Ummata Oromoos ta’e sabni kamuu, sabaa mitii namni dhuunfaan kamuu isa hin filanne, ykn bakka isa hin buufanne. Egaa isan har’aas ta’e warri durii kanneen shiraa fi afaan qawweetiin aangoo qabatan kunneen aangoo humnaan qabatan kanatti fayyadamanii yakka, shira hojjeechaa turan. Hojjechaas jiru.Keessuma wayyaaneen gaaraa amma dakaatti aangoo biyyattii dhuunfachuun waraanaa, tikaa, fi daldalaa kaasee amma hojii siviliitti shirri, yakkii fi saamichii raawwachaa ture amma hin qabu.
Uummanni Oromoo guyyaa gabroonfattoonni Habashaa nafaxanyoonni qawwee gargaarsaa hidhatanii itti duulanii isa cabsanii kaasee amma har’aatti diinaaf harka kennee hin beeku. Qabsoo abbaa biyyummaa isaa deeffachuuf taasisurraayis duubatti jedhee hin beeku. Waggoottan 150n darban guutuuf sadarkaanii fi toftaan gara gara haa ta’u malee lola of ittisaafi deebisanii biyya abbaa ofii dhuunfachuurra jira. Mirga isaaf falmuu akkuma itti fufeetti jira. Keessumaa erga ABOn ijaaramee kaasee qabsoo isaa babbalisaa fi ammayyeessaa gabroonfattoota qawween isa cabsan kana falmaa jira. Dargii kaasee amma Wayyaanee haraatti qawweenis, hololaanis Oromoos ta’e dhaaba isaa ABO qabsoo bilisummaa irraa maqasuun hin dandeenye. Fuunduraafis hin danda’amu.
Waggoota 27n darban keessa addatti ammoo waggoota 4n darban keessa Oromoon ilmaan isaa ABO/WBO/Qeerroo waliin ta’ee qabsoo hadhooftuu gaggeessaa jiruun injifannoo irratti ijifannoo galmeessaa jira. Injifannoon kunis har’a dirree bahee Oromoo mitii saboota cunqurfamoo impaayeerittii kaanifuu fakkeenya ta’eera.
Yeroo ammaa kana WBO/Qeerroon diina waggaa 150 oliif uumata Oromoo irratti daadee baase akka deebi’ee hin suphamnetti unkuteessee jira. Mootummaan TPLF/EPRDF afaaniin jira jedhee haa hololu malee hin jiru, burkutaayee jira. Mootummaan shiftaa fi faashistiin waggoota 27n darbaniif akka farda fuuloo hin qabnee biyyattiirra garmaamaa ture kun har’a qabsoo Oromootin dhiibamee qarqara qilee gaheera. Irreen isaa ajjeechaa, hidhaa fi dararaaf duubatti hin jenne rukutameera. Kan hafes rukutamaa jira. Har’a Oromoon galma qabsoo isaa bira gahuuf daandiin isa hafe muraasa.
Sirni faashistiin TPLF/EPRDF ofiin jedhu kun jira haa jedhu malee hin jiru. amma yeroon isaa yeroo kufaatii isaa amanee nagahaan harka kennetuudha. Osoo balaan kana caalu biyyattiis ta’e murna kanatti hin dhufne daandiin isa baasuus kanuma. Haa ta’uutii wanti yeroo ammaa kana argaa jirru sirni burkutaawaa jiru kun kufaatii isaa amanee nagahaan karaa gadi dhiisurra, akkuma kanaan duraa bara bittaa fi saamichaa isaa dheereffachuuf OPDO of dura qabee holola faayidaa hin qabne gaggeessu dha. Caccabaa isaa funaanee walitti suphee bubbuluuf yaalaa jira.
Gaafiin Oromoo, kan wareegamaafii ture akka waan bulchiinsa gaarii, kanneen hidhaman gadi naaf lakkisaa ta’ee fi wayyaanuma jalatti bulchiinsa gaarii nuuf diriirsaa ta’eetti OPDO bobbaasee hololchiisaa jira. OPDOn akka waan Oromoon mirga abbaa biyyummaa gaafataa hin jirreetti waayee Itiyoophiyummaa afarsaa jirti. Gaafin Oromoo mirga abbaa biyyummaa, hiree ofii ofiin murteeffachuudha. Oromoon Itiyoophiyaan jiraachuu hin qabdu jedhee qabsaawee hin beeku. Jiraachuu dhiisuun dhimma ishiiti. Oromoon osoo mirga hiree murteeffanaa, ofiin of bulchuu jedhee falamuu, osoo mirga abbaa biyyummaaf qabsaawaa jiruu OPDOn feedaraala fakkeessii sanuu diigdee tokkummaa, tokkummaa itiyoophiyaa jettee hololuun garuu diinummaa isiin uummata Oromoof qabdu kan caalaatti mirkaneessaa jiruu dha. OPDOn akka sabaatti ijaaramuun, ofiin of bulchuuf, gabrummaa jalaa of baasuuf qabsaawun faashina yeroon itti darbe jettee hola ifatti qabsoo uummata oromoo balaaleeffachaa jirti. Akka muldhachaa jirutti sirna bara minilik Oromoo irratti ijaaramee waggoota 150 ol addatti baraoota 27n darban uummata Oromoo miidhaa ture ammas irra tursiisuuf carraaqxi. Tattaafatti, kanaaf ragaa guddaan ammoo alaabaa fi dhaadannoo Waxabajjii 16 bara 2018 sirna deeggarsa Dr Abiyyi Ahimad jedhamee bahamerratti nafaxanyootaan qabatamee bahameedha. Alaabaa miniliki, Afaan tokko,Aaadaa tokko kan jedhu ifatti callaqqisaa oole. Abiyyis Itiyoophiyaa faarsaa oole.
Har’a uummanni Oromoo yakka kan kanaan duraa caalaa TPLF/OPDO/EPRDFn itti as deemaa jiru hubachuu qaba. Oromoon kan inni qabsaawaafi ture, kan ilmaan isaa itti gabbaraa ture mirga isaa kabachiifachuuf ta’uu yeroo mara wal yaadachiisuu qaba. Hiree isaa ofiin murteeffachuuf malee sirna qabsoo isaan kuffisaa dhufe deebisuu, Wayyaanee suphuufi miti. Itiyoophiyaan Oromoof mana hidhaa turte, Keessumaa bara Wayyaanee Oromoon hidhaa fi dhayana rasaasaa ture.saamichis akkasuma. Egaa kana keessaa bahuuf qabsaawaa ture. Qabsoo isaatinis mana hidhaa akka sabaatti keessa ture kana cabsee dirree bilisummaatti deemaa jira. Uummata qabsoo isaatiin mana hidhaa akka sabaatti keessa ture cabsee bahaa jiru kana ammoo mana hidhaatti deebisuuf carraaqqin godhamaa jiru yakka. OPDOn yakka hojjechaa jirti. Oromoonis yakka irratti raawwataa jiru kana hubatee qabsoo isaa caalaatti cimsee fi finiinsee itti fufuun mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoonfachuu qaba. Injifannoo dhiiga ilmaan isaan argate Wayyaanee fi ergamtoonni sirnichaa kaneen akka OPDO saamuu hin qaban.
Previous article“We are Like the Dead” Torture and other Human Rights Abuses in Jail Ogaden, Somali Regional State, Ethiopia
Next articleWaca dhiisne humna WBO cimsuu waan dhufuu maluuf qophaawu